Madaxweyne Axmed Madoobe oo ka digey in doorasho hal dhinac ah ay ka dhacdo dalka - Home somali news leader
Home NEWS Madaxweyne Axmed Madoobe oo ka digey in doorasho hal dhinac ah ay...
Madaxweyne Axmed Madoobe oo ka digey in doorasho hal dhinac ah ay ka dhacdo dalka
Madaxweynaha dowlad goboledka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka digey in doorasho hal dhinac ah dalka ay ka dhacdo waxana uu ku baaqay in shir la isugu yimaado oo la wadahadlo.
Axmed Madoobe oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in sida hadda xaalku yahay aysan ahayn mid wanaagsan balse loo baahan yahay in laga wada tashado.
Waxa uu Madaxweyne Axmed Madoobe ka digey in dad gaar ah la yiraahdo doorasho qabta isla markaana la diido in la wadahadlo kuwaasoo uu ula jeeday Maamulada Galmudug,Hirshabelle iyo Koofurgalbeed.
“Waxaan ka digayaa in fariin aan jirin la is weydaarsado,Soomaaliya Haddii Xamileyso Kalgiitalisnimo iyo Anaa iri iyo sidaan hala yeelo ma aysan Burburteen “ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
“Waxaan sugeynay in dib na loogu soo laabto oo saddex qodob oo aan u dhiibnay Madaxweyne Qoorqoor uu jawaabteeda nagu soo celiyo wixii lagu heshiiyay noo keeni lahaa sidaan u sugeynay ayaan maqlaynaa waa la aqbalay heshiiskii jawaab ma helin,jawaab munaasabkeedi dhacday ma ahan,”ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Sidoo kale Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ka hadlay xaalada gobolka Gedo waxana uu sheegay inuu diyaar u yahay in la fuliyo heshiiskii September 17 ee Muqdisho balse la isku fahmi la’ yahay qaabkii loo fulin lahaa.
“Waxan diyaar u nahay inaan qabano doorasho,waana ina la abuuraa qaab aan uga qaban karno doorasho Garbahaareey maamul kama jiro amni kama jiro,waa in Maamul Goboleedka loo daayo doorashada,”ayuu sii raaciyay.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay dadka gobolka Gedo in ay midnimada ilaaliyaan isla markaana aan la kala qeybin.
Previous articleBritain says it is heading towards the Covid-19 vaccination target when the death toll amounts to 80,000
Next articleAlgeria’s leaders return to Germany to be treated for Covid-19 complications